Arrimmaha socdaalka ayey bulshadu ugu xiise badan tahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Arrimmaha socdaalka ayey bulshadu ugu xiise badan tahay
La daabacay tisdag 19 april 2016 kl 13.01
Dadka Iswiidhishka iyo soogalootiga
Dhismaha jaamicadda Göteborg. sawir: Jazz Munteanu
War-bixintii sannadlaha ee jaamicadda Götebrog, laguna magacaabo Som-rapporten ayaa lagu sheegay in labadii ruuxba mid ee bulshada dalkan ku dhaqani u aragto in arrimmaha socdaalka iyo iyo is-dhex-galku yihiin waxyaabaha ugu muhiim-san ee howlaha bulshada.
53% ayey ula muuqataa in arrimmaha ugu muhiim-san ee bulshadu ka fekertaa tahay howlaha la xiriira socdaalka iyo is-dhex-galka, halkii ey horey uga ahaan jireen dar-yeelka caafimaad iyo tacliinta, sida ku caddaatay baaritaan-sannadeedkii machadka Som-institutet ee jaamicadda Göteborg, midkaasina oo su’aalo lagu weeydiiyey bulshada.
Marie Demker, ahna caalimad ka howl-gasha jaamicadda Göteborg, isla-markaana ku takhasustay culuunta maamulka dawlad-nimo ayaa sheegtay in xiisaha loo hayo siyaasadda soo-galootiga iyo is-dhex-galka ey bulshadu ku kala duwan yihiin hadba xisbiga uu shakhsigu ka tir-san yahay ama u codeeyo.
- Waayadii hore ayay su’aasha la xiriirta dar-yeelka caafimaad ee gaarka loo leeyahay ahayd mid ey isku haysteen ama ka doodi jireen xisbiyada siyaasadda ee garabyada Bidix iyo Midig. Iminkase waxaa ka hor-maray oo booskii ka qaaday midda socdaalka, sida ay sheegtay caalimaddu.